သတင်း - ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်နောက်ထပ်ဒီဇယ်ဂျင်နက်သည်ဖောက်သည်၏ဆိုက်သို့ရောက်ရှိသည်
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးရေးဖြတ်သန်းပြီးနောက် မီးစက်ထုတ်လုပ်သူ Kentpower Electromechanical သည်မြန်မြန်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များအားလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ရန် open-frame မီးစက်တစ်လုံးကိုအိမ်ခြံမြေသို့လုံခြုံစိတ်ချရသောအရန်အဖြစ်သိုလှောင်ထားသည်။
The gensetဖောက်သည်၏ site ကိုရောက်ရှိ, လက်ခံမှုစစ်ဆေးမှုများဖြတ်သန်းနှင့်အရပျ၌တည်ရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Kentpower အင်ဂျင်နီယာများသည်စက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖယ်ထုတ်ပြီးဖောက်သည်အားအသုံးပြုရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီဇယ်မီးစက်များသည် ၁၂ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအောက်ပါပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင်ထုတ်လွှတ်သည့်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
1. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်:5～ 40 ℃
2. ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: <၈၅% (၂၅ ℃)
3. အမြင့်: <1000 မီတာ
အလုပ်လုပ်သောအခါ 4. longitudinal စောင်း: <10 ဒီဂရီ
၅။ လျှပ်ကူးသောဖုန်မှုန့်၊ သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုဖျက်ဆီးသောဓာတ်ငွေ့နှင့်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်နေရာများမရှိပါ
Kentpower ထုတ်လုပ်သည့်စက်များသည်အဆင့်မြင့်ပြီးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့တွင်ရင့်ကျက်သောနည်းပညာ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စီးပွားရေးချွေတာမှုနှင့်ရေရှည်လည်ပတ်မှုစသောထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကိုစက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု၊ အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေး၊